सावधान! खोप केन्द्रबाट पनि मानिसको मृत्यु भइरहेको छ – Health Post Nepal
२०७८ भदौ १६ गते १०:२६
एक ६३ बर्षीय महिला पहिलो पटक खोप लगाउन खोप केन्द्रमा पुगिन्। खोप त लगाइन् तर लगाएको केहि दिनमा नै ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र छाती दुख्ने समस्या देखियो। अस्पताल पुगुन्जेल कडा निमोनिया भैसकेको थियो। अस्पतालमा केहि हप्ताको अथक प्रयासको बाबजुद बिरामीको मृत्यु भयो। बिरामीमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप वा अरु कुनै थप दिर्घरोगहरु थिएन।
अर्को घटनामा, ९१ बर्षीय बृद्ध कडा निमोनिया भएर अस्पताल भर्ना भए।बिरामी हुनु भन्दा एक हप्ता अगाडी पहिलो पटक खोप लगाउन खोप केन्द्र गएका थिए।दिर्घरोगहरु पनि भएका सो बिरामी उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भयो। मसँग यस्ता धेरै संक्रमितहरु सम्पर्कमा छन जो खोप केन्द्रमा गएको केहि दिनमा नै कोरोनाका लक्षणहरु देखिएर परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भै होम आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्।खोप लिएर कोरोनाबाट सुरक्षित हुन्छु भनि खोप केन्द्र जाँदा त्यहि ठाउँबाट संक्रमित भै मृत्युवरण गर्नु जस्तो बिडम्बना अरु के होला?
दोश्रो लहरको सुरुवातीमा पनि खोप केन्द्रहरुबाट कोरोना फैलने गरेको देखेको थियो। मसँग सम्पर्कमा आएका धेरै कोरोना संक्रमितमा खोप लगाउन गएको हप्ता–दश दिनमा कोरोना लक्षण देखिने गरेका थिए। सो समयमा मैले विभिन्न माध्यमबाट खोपकेन्द्रको व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्ने सुझाब दिने गरेको थिए।
हाल कोरोनाको दोस्रो लहरमा केहि कमी देखिए पछि नेपाल सरकारले खोप दिन शुरु गरेको छ तर कतिपय खोप केन्द्रहरु भने अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। यसमा स्वयंम नागरिकहरुले पनि सतर्कता अपनाएको देखिदैन। दुरी कायम गरेर खोप लगाउन अनुरोध गर्ने गरेता पनि त्यसको पालना भएको छैन। वास्तवमा, खोप केन्द्र र नागरिकको संयुक्त प्रयासले मात्रा कोरोना फैलनबाट रोक्न सहज हुनेछ।
खोप केन्द्र शान्त र नागरिकहरु संयमित भै लाम लागेर खोप लिनु पर्दछ। लाम बस्दा सकेसम्म २ मिटरको दुरी कायम गर्नु पर्दछ।जनघनत्व बढी भएका ठाउहरुमा पर्याप्त खोप केन्द्र नहुदा आवश्यक दुरी कायम गर्न व्यवहारिक कठिनाई हुने गरेको देखिन्छ। तसर्थ शहरी क्षेत्रमा खोप केन्द्रहरु धेरै खोलिए स–साना समुहमा खोप दिन सकिने थियो जसले गर्दा दुरी कायम गर्न सजिलो हुनेथियो। जसले संक्रमण सर्ने सम्भावना पनि न्यून हुनेछ।
खोप केन्द्रमा आफ्नो पालो पर्खदासम्म मानिसहरु एक अर्कासंग नजिक भै कुराकानी गर्ने गरका छन्। गफ गर्दै जाँदा मास्क पनि नाक वा चिउडो मुनि पुर्याउने गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्था धेरैलाई थाहा भएको हुँदैन, संक्रमित भैसकेपछि स्रोतको बारेमा आफै अन्योलमा परेका वा अनविज्ञ भएका देखिन्छन्।
अन्तमा, जटिल अवस्था वा मृत्युदर कम गर्न हाल खोप अति आवश्यक र निर्विकल्प उपाय हो।खोपले हाल तिब्रता र अभियानको रुपमा निरन्तरता पाहिरहेको पनि छ।तर खोप केन्द्र व्यवस्थित नहुँदा संक्रमणबाट बच्ने आशमा खोप लिनेहरु संक्रमित भएर मृत्युवरण गर्नु परेका मसँग थुप्रै उदाहरण छन।तसर्थ खोप अभियान निरन्तर अगाडी बढ्दै जादा आम नागरिकले पनि उत्तिकै संयमित र जिम्मेवार भएर खोप लगाउनु पर्दछ।
अहिले खोप केन्द्र कोरोनाको स्रोत बनिरहेका छन्। यसलाई रोक्न बेलैमा सचेतना र सतर्कता अपनाऔं। किनभने खोप अभियानले लामो समय लिन सक्नेछ। तसर्थ सो अवधिभरमा थप मानिसहरु खोप केन्द्रबाट नै संक्रमित हुने र मृत्युवरण समेत गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।